Thyme (thyme): uru bara uru na contraindications - Thyme - 2020
Ihe bara uru, ihe onwunwe na ngwa nke thyme
Thyme bụ ihe na-akpụ akpụ nke na-etolite na ọdịdị nke osisi shrub nke ezinụlọ Labiotọs. A na-amata osisi a na thyme. N'ezie, thyme na thyme bụ ezigbo ndị ikwu nke otu genus. Onye ọ bụla n'ime ha nwere ụdị nke ya, ụfọdụ dị iche iche na agba, ísì, ntakịrị obere dị iche iche n'ụdị epupụta. Ma ọdịdị ha na-enye anyị ohere iwepụta ha maka otu osisi ahụ, ọ bụ otu mmadụ ka ha ji eme ihe.
Ihe thyme nwere ihe na-akpụ akpụ, ihe kpatara eji egbute ya na otu esi eji ya - nke a ga-atụle n'isiokwu. Tinye akwukwo nwere ike imata ihe niile ha nwere, ma mgbe ahu o ga-erite uru ma ghara imebi ya.
Thyme bara uru
Pharmacological Njirimara nke thyme
Esi eji ọgwụ gi eme ihe
Thyme na cosmetology
Ojiji nke thyme na nri
Nkwadebe maka ihe ndi ahuike
Ndị na-enweghị ike iji ya mee ihe
Thyme (thyme): ngwongwo chemical na ihe bara uru
Ihe mejupụtara ọgwụ nke thyme nwere ọgwụ nje osisi siri ike - carvacrol. O nwere ike imeri Staphylococcus aureus. Ọzọkwa n'ime ihe mejupụtara nke osisi bụ mmanụ dị oké mkpa nke nwere ọtụtụ thymol, linalool, karyofillen.
Osisi nwere ihe ndị a:
vitamin A, otu B 1-9, C, E, K, PP, beta-carotene;
micro na macronutrients - sodium, potassium, iron, calcium, selenium.
Ihe omimi nke thyme bụ 276 kcal maka 100 grams nke ngwaahịa. Akụkụ kasị ukwuu nke ọdịnaya caloric dabara na carbohydrates, ahịhịa ha nwere 63.94 grams, nke hà 256 kcal. Ndị na-edozi na gram 9.11 - 36 kcal, abụba - 7.43 grams ma ọ bụ 67 kcal.
Thyme nwere ihe bara uru ndị a:
Ihe ndị na - arụ ọrụ - resins, mmanụ dị mkpa, tannins, saline ịnweta, flavonoids na obi ilu, acid - na - enye ọtụtụ ihe omume nke ogwu na ahụ mmadụ.
Igwe gị na-abakwa uru n'ihi na ọ bụ ezigbo ụlọ osisi mmanụ aṅụ. Mmanụ aṅụ sitere na ya dị ezigbo ụtọ. Njirimara bara uru nke thyme na-apụta mgbe ị na-atụgharị na tii - a na-ewere ya dị ka ihe na-akpali akpali sitere na nrụgide, maka ọgwụgwọ nke ịda mbà n'obi, migraine, neurasthenia. Ojiji nke thyme na tii bara uru maka ụmụaka na-ata ahụhụ site na anaemia.
A na-eji ahihia ahihia eme ihe maka ọrụ ofufe. Taa, akụkụ dị n'elu nke osisi ahụ bụ ihe dị ukwuu na ụlọ ọrụ nsị.
Ọkụ Thyme nwere ihe ngwọta n'ihi ngwongwo ya. Thymol, nke bara ụba na thyme, na-ezo aka na mkpụrụedemede phenol. Ma thymol nwere obere mgbu na enwe mmetụta dị egwu na membranes mucous, bụ ezigbo onye na-ahụ maka nje bactericidal na ọgụ megide osisi ogwu. Thymol na-arụsi ọrụ ike megide oria a na-agwọ ọrịa, ụgbụ ụgbụ, tapeworms.
Mmanụ ndị dị mkpa dị na osisi dị irè maka bronchitis na ọrịa ndị ọzọ, karịsịa maka ụkwara ụkwara na ụkwara ume ọkụ. Ha na-abakwa uru na mkpasu ụbụrụ na-efe efe.
Njirimara nke ndị na-akpụ akpụ nke na-akpụ akpụ na-eme ka ọ bụrụ ọgwụgwọ diaphoretic dị irè, nke dị mkpa maka oyi, imi na ọkụ. Ikike ịchịkwa ọrụ nke usoro ụjọ ahụ bara uru nye ndị na-arịa ụra nke ọma.
Ntughari na eriri afọ wepụrụ site na decoctions na infusions nke thyme. Ya mere, a na-ewere ya mgbe ị na-eri nri, nri dị arọ, iji normalize mgbaze.
Thyme nwere uru bara uru n'imeso arthritis na rheumatism. N'okwu a, a na-eji ya n'èzí. Ọzọkwa, a na-eji thyme mee ihe n'ụzọ dịpụrụ adịpụ n'ụdị ọdịdị, nchịkọta na ointments, nke dị irè maka ọrịa anụahụ.
Ị ma? Ngwurugwu nke thyme na-eme ka ịṅụ mmanya na-aba n'anya, n'ihi ya, a na-eji ya aṅụ ọgwụ ọjọọ.
Thyme bụkwa uru maka ụmụ nwoke. Ọ na-atụle ihe ndị dị mkpa maka ahụ ike ụmụ nwoke. Selenium na osisi dị mkpa maka njikọ nke testosterone, molybdenum na-arụ ọrụ enzymes ndị na-ahụ maka ọrụ mmekọahụ.
Na ndi mmadu ndi ogwu, a na-eji thyme eme ihe mgbe o di ya, uto na, n'eziokwu, ngwogwu ihe. Ụdị ngwa ngwa kachasị bụ tii tea. Maka nkwadebe nke ndị dị otú ahụ, ị ​​nwere ike iji osisi ọhụrụ ma ọ bụ nke a mịrị amị. A na-eji teaspoon nke herbs tinye ya na otu iko mmiri ọkụ, siri ọnwụ ruo minit ise - na tii dị njikere, ọ dị mkpa ka ọ nyocha ya. I nwekwara ike ikpo ogwu na nwa tii.
Na ọgụ megide alcoholism jiri decoction nke thyme. A kwadebere ya site na ị wụsa ihe dị ka gram 15 nke ihe onwunwe na 500 ml nke mmiri esi mmiri. A na-etinye ngwakọta maka nkeji 15 na mmiri mmiri, a na-enyo ma na-etinye mmiri na-esi mmiri iji nweta 500 ml mmepụta. Ụdị mma ndị dị otú a dị irè iji wepụ ya pụọ ​​na binge. Ị nwere ike iwepụta decoction maka izu abụọ na gram 50, mgbe ọ ṅụrụ obere mmanya. Ihe mgbagwoju anya na-enyere aka ịjụ mmanya.
Mgbe radiculitis, ọrịa nke nkwonkwo kwadebe thyme tincture. Maka nkwadebe ị ga - ewe 8 tablespoons nke ngwaọrụ, wunye ha 0,5 lita nke vodka. Na-esi ọnwụ na ebe gbara ọchịchịrị ruo izu abụọ, n'ikwe. Mgbe ahụ, dochie ihe ngwakọta ma gbanye n'ime akụkụ ahụ dị n'ahụ. Ị nwekwara ike ịsa ahụ na ọrịa dị otú ahụ - were 200 grams nke thyme maka lita 2 nke esi mmiri na-esi ọnwụ. Saa ahụ maka minit 15 na ụbọchị abụọ.
Mgbe ọrịa nwanyi nwere ike ime douching. Maka ha, ịkwesịrị ịsa otu akụkụ nke ihe ọkụkụ ahụ na akụkụ atọ nke mmiri, obụpde maka minit ole na ole, dị jụụ na nsogbu. A na-enwe obi abụọ n'abalị.
N'adịghị ike nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ, jiri uzomume a: 2 tablespoons of herbs pour 500 ml of water water, insist 2-3 hours. Mgbe ogbugbu ma were ọkara otu iko maka ọkara otu awa tupu nri ugboro abụọ n'ụbọchị.
Ị nwere ike iji ọgwụ na-eme ihe na-emetụta ụbụrụ gị, pharynx. A na-awụsa ahịhịa na-esi na mmiri esi mmiri, tinye ya maka otu awa na mgbe nsachasịchara ọnụ ya na juputara mmiri ọkụ. Ọ na-enyekwa aka na eze mgbu.
A na-ewere Thyme decoctions n'okpuru ọnọdụ ndị anneh: gobere ihe mgbu, ụra nke ụra, nhụjuanya ụjọ, neuralgia, epilepsy, egwu, nchekasị, na oyi baa, anaemia, bronchitis, ọrịa obi, ọrịa nke afọ, na ihe ndị ọzọ.
A chọtara mmanụ gị ngwa na cosmetology. A na eji ya maka mma na ike nke ntutu. Tinye ya n'ihu nchacha - ịkwesịrị ịkpụ n'ime ntutu ma ọ bụ mix mmanụ na ncha, ihe dị ka 5 ml kwa 20 ml nke shampulu. Ọ ga-enyere tufuo dandruff, normalizes ọrụ nke sebaceous glands, na-ebelata abụba ọdịnaya nke ntutu isi.
Ọzọkwa, iji gbochie ntutu isi, ana-eji ihe ịchọ mma gị mee - 4 tablespoons of herbs pour 400 ml of water, boil for 10 minutes, strain, cool. Mgbe ịsacha ntutu isi na-asa ntutu. Wepụ ya na ọ dịghị mkpa.
Ngwurugwu herbal na thyme gụnyere bath baths maka akpụkpọ ihu. Thyme (thyme) wunye mmiri mmiri maka minit 20. Were otu tablespoon nke ahịhịa maka ọkara otu liter mmiri. N'elu okpokoro na-ekpo ọkụ na-ehulata, na-ekpuchi isi ya. Debe ihu n'elu igwe batrị maka minit 10.
Ọ dị mkpa! Ị ga-agbaso iwu nchekwa. A ghaghị ime usoro ahụ n'emeghị fanaticism - ọ bụrụ na ọ dị oke ọkụ, ị gaghị anabata ya. Ọ dị mkpa inye okpomọkụ dị jụụ na nlele dị mkpa nke ihu n'elu broth.
Mgbe flabby anụ ahụ, abawanye pores, inflammations tinye compresses nke thyme. A na-etinye mmiri na-esi na mmiri esi mmiri na tablespoon nke thyme, kwe ka ajụkwa. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike ịcha akwa gauze ma ọ bụ ákwà owu n'ime efere ma tinye aka na ihu. Usoro ahụ na-ewe nkeji 15-20.
A na-eji shee gị mee ihe na nri. A na-eji ihe eji esi nri a ma ọ bụ nke a mịrị amị. Anwụrụ ọkụ, oseose, ubé ilu uto bụ ụdị thyme na efere.
Thyme na-agbakwunye na efere ahụ na-eme ka uto na ísì ụtọ dị mma, nye ọnụma. Na azụmahịa ịzụ ahịa gị thyme bụ isi na ose. Akwukwo nri efere - kabeeji na poteto - na-gbanwee na thyme.
Iji ọgwụ gị mee ihe dị ka ihe eji esi nri maka nri abụba na-enyere aka melite mgbaze. Ọ bụ n'ihi ihe ndị dị mma nke aromatic thyme na-eji obere obere nri.
Ị ma? Ọ bụrụ na mmanụ gị na-agbakwunye broth anụ, ọ nwere ike igbochi ibu nke nje bacteria ruo ụbọchị atọ.
Ọrụ dị mkpa na-arụ site na mpaghara ebe gị na-etolite. Achịkọta ahịhịa ga-eme naanị na mpaghara nwere ezigbo nkà mmụta ihe eji eme ihe, nke dị anya site n'okporo ụzọ na ọrụ.
Maka ọgwụgwọ, nakọta akụkụ nke ikuku nke osisi ahụ. A na-eme nchịkọta ahụ n'oge oge okooko osisi - njedebe nke June - mmalite nke August. Ome na peduncles bee na mkpa, tinye ya n'ime akpa ma ọ bụ nkata ka ha ghara ịla azụ ma ghara imetụ ya.
Ọ dị mkpa! Maka owuwe ihe ubi ọ dịghị mkpa iji dọpụta gị na mgbọrọgwụ. A naghị eji mgbọrọgwụ mee ihe maka ọgwụgwọ, mana ha dị mkpa ka osisi ahụ wee nwee ike ịmụba vegetatively.
A ghaghị ịnakọta Thyme na ihu igwe akọrọ, mgbe igirigi nke ụtụtụ akpọnwụla. A ghaghị ihichapu ihe ndị dị na ya site na mkpụrụ osisi ndị a na-amịpụta, ndị Ome na-agbarụ ahụ, ndị na-egbute ya, nakwa nke ụmụ ahụhụ.
Dicha thyme n'okpuru n'okpuru ụlọ, na ndò na n'ebe a na-ọma ventilated. A na-etinye ahihia n'ime akwụkwọ dị mkpa na akwụkwọ ma ọ bụ na -acha anwụrụ anụ, nwere ike ịmịchaa n'ụdị a kwụsịrị.
Ọ dị mkpa! A naghị akwado ndị na-ekpocha nkụ ka ha jiri ya mee ihe, dịka osisi ahụ nwere uru mmanụ dị oké mkpa nke ga-ekpocha n'oge accelerated ihicha.
Mgbe akpochapu, ogwu gi na-adighi nma, akwukwo na okooko osisi daa. Nchịkọta nchịkọta na-agụnye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, okooko osisi na-acha aja aja na okooko osisi na agba.
A pụrụ ịchekwa Thyme n'ime ite iko, akpa akpa akpa, akwụkwọ ma ọ bụ kaadiboodu. Na polyethylene, akụrụngwa na-ejikọta ma hapụ ọgwụ ọgwụ. Chekwaa maka afọ abụọ.
Thyme nwere uru bara uru na contraindications. A gaghị eji Thyme mee ihe na ọnọdụ ndị a:
belata ọrụ gị thyroid.
E kwesịrị ileba anya na ngwa ahụ dị ime. Ụfọdụ nnyocha na-ekwu na thyme nwere ike ịmalite ụda nke akpanwa, nke a na - emekwa ka ọpụpụ. Na nke a, a gaghị eme tii si thyme.
Ọ dịkwa mkpa ka ị cheta na ngwaahịa ndị ị na-eme nwere ike iduga na mmepe nke hypothyroidism na ọbara mgbali elu. Nnukwu nnupụisi na-akpata ọgbụgba. Mana n'ozuzu, ojiji nke thyme nwere mmetụta ọgwụgwọ n'ahụ ahụ. Ihe bụ isi bụ ime ihe ụfọdụ, ahịhịa ga-eweta naanị uru.
Arizema (odnopokrovnitsa): kụrụ na ilekọta osisi herbaceous
Ụzọ nke na-eto eto na-eto eto na-eto eto na bọket n'akụkụ: nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka na njehie omume
Haworthia - obere ihe na-ewu ewu maka ụlọ